छोरी अपहरणमा परेको मुद्दा लिएर प्रहरी समक्ष पुगेका बाबु, प्रहरीको बोलि व्यवहारबाट दु:खित ! – ebaglung.com
छोरी अपहरणमा परेको मुद्दा लिएर प्रहरी समक्ष पुगेका बाबु, प्रहरीको बोलि व्यवहारबाट दु:खित !
२०७५ बैशाख ४, मंगलवार १०:४६	Top News, थप समाचार
विजय राना, बागलुङ २०७५ बैशाख ४ । आफ्नी १२ वर्षीया छोरीलाई आफ्नै बेकरी उद्योगमा काम गर्ने मिस्त्रीले जबरजस्ती करणी तथा अपहरण गयो भनि कार्वाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङमा पुगेका बेकरी उद्योगका सन्चालक प्रहरीको व्यवहारबाट दु:खित बनेको बताए ।
बागलुङ जिल्लाको बरेङ गाउपालिका हुग्दिशिर घर भई हाल बागलुङ बजारमा बेकरी उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका वीरबहादुर मगर (नाम परिवर्तन)ले आफ्नै बेकरीमा मिस्त्री काम गर्ने रुपन्देही जिल्ला घर भई देवदह नगरपालिका वडा न. १ बृता बजारका २८ वर्षिय रोहित केवोतबाट आफ्नी छोरी सरिता (नाम परिबर्तित) लाई ललाई–फकाई तथा त्रास देखाई अपहरण, जबरजस्ती करणी र शरीर बन्धक सहितको जाहेरी लिएर जिप्रका पुगेका थिए ।
उनी भन्छन्– प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेन । फिरौती नमागेकोले अपहरण नहुने बताउँदै प्रहरीले अपहरणको मुद्दा फिर्ता गर्न दवाव दियो । मुद्दा दर्ता गर्नै मानेन, उल्टै दिमाग नभएको र गोरु भनेर गाली गर्न थाले पछि ‘अपहरण’ शब्द निकालेर जबरजस्ती करणीको जाहेरी दर्ता गराएँ । उनले प्रहरीको बोलि र व्यवहारले उल्टै पीडा थप्ने काम गरेको बताए ।
जिप्रका बागलुङका प्रहरी उपरीक्षक दिपक रेग्मीले अपहरण मुद्दा नठहर्ने भएकोले ‘अपहरण’ सम्बन्धी मुद्दा निकाल्न सुझाव दिएको बताए । घट्नाको अध्ययन गर्दा अपहरण सम्बन्धी मुद्दा नठहर्ने देखिएकोले आफुले निकाल्न सुझाएको उनको भनाई थियो ।
छोरी सरिता (नाम परिवर्तित) का बाबु भन्छन्– यही बैशाख १ गते देखि हराएकी छोरी स्याङजा वालिङबाट २ गते मात्र फेला परिन । त्यही पनि गाडी चालकको चलाखीले उनी उम्कन सफल भईन । गाडीभित्र केवोतको गतिविधि शंका लागे पछि ड्राइभरले स्याङजाको बयरघारी प्रहरी चेकपोष्ट भित्र गाडी लगेर प्रहरीलाई खबर गरिदिएछन् । प्रहरीले सोधपुछ गर्दा छोरी अपहरणमा परेको बताए पछि छोरीको पत्ता लाग्यो ।
उनले भने, छोरी सरिताको भनाई अनुसार ‘केवोतले बैशाख २ गते अर्थात आईतबार विहानै एक यात्रुबाहक बसमा पर्वत कुस्मा सम्म लग्यो । कुस्मामा प्राइबेट गाडी मगायो । गाडीमा चढायो र लग्यो । उसले कुस्मा जाने अघिल्लो दिन एक गते पनि गाली गरेको थियो । म संगै गइनस् भने तलाई, तेरो बा–आमालाई मारिदिन्छु भन्दै धम्काएको थियो । मनमा अत्यन्त त्रास थियो सरिता भन्छिन्–त्यसैले भोलिपल्ट बिहान पाँच बजे उठेँ । मनमा एकदमै डर लागिरहेको थियो । ढोकामानै उभिएको थिएँ । बाबा बेकरी उद्योगमा काम गर्न थालिसक्नु भएको थियो । त्यतिनै बेला उसले मेरो पाखुरामा समातेर तान्यो । मैले ‘बाबा’ भनेर चिच्याएँ । बाबाले सुन्नु भएन, त्यस पछि मुख थुन्योे जीप पार्क हुँदै बागलुङ ट्राफिक चोकमा लग्यो र त्यहाँबाट बस चढायो ।’
अभियुक्त रोहित केबोतलाई बैशाख २ गते नै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघी बढाएको प्रहरीले बताएको छ ।
बोहोरागांउमा खानेपानी तथा स्वास्थ्य सरसफाई आयोजनाको संयुक्त उद्घाटन
भवानी विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय, फलेवासमा आईसीटी ल्याब सञ्चालन !